၂၀:၀၂၊ ၃၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ နေ့က P199 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) ((GR) Duplicate: File:PIA19423-Mercury-AbedinCrater-20150416.jpg → File:Oblique Abedin 2015.png Exact or scaled-down duplicate: c::File:Oblique Abedin 2015.png) တည်းဖြတ်သည့်မူ
Trace amounts of အာဂွန်, နိုက်ထရိုဂျင်, ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်, ရေငွေ့, ဇီယွန်, ခရိုင်ပတွန်, နီယွန်
ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် (အင်္ဂလိပ်: Mercury) သည် နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း၌ နေနှင့် အနီးဆုံးဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်သည် အလွန်သေးငယ်သော ဂြိုဟ်ဖြစ်ပြီး လကမ္ဘာကဲ့သို့ပင် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ချိုင့်ခွက်ကြီးများ ရှိသည်။ နေ့အခါတွင် အလွန်ပူပြီး ညအခါတွင် အလွန်အေးသည်။ အပြောင်းအလဲမှာ နေ့ဘက် ၄၂၇ ဒီဂရီ ဆဲဆီးယပ်စ်မှ ညဘက် အနုတ် ၁၇၃ ဆဲဆီးယပ်စ် ဖြစ်သည်။ ဝင်ရိုးစွန်းများမှာ အနုတ် ၉၃ ဒီဂရီ ဆဲဆီးယပ်စ်အောက်သို့ စဉ်ဆက်မပြတ် ရှိသည်။ မာကျူရီ၏ မြေမျက်နှာမှာ လကဲ့သို့ပင် ပေါ်လွင်သည်။ အလွန်ပြင်းထန်သော နေရောင်ခြည်တည်ရှိသော်လည်း မာကျူရီဂြိုဟ်ပေါ်တွင် နေရောင်ခြည်နှင့် မထိတွေ့သောနေရာ၌ ရေခဲတည်ရှိနိုင်သည်ဟု ရေစီးဆင်းသည့်ပုံစံများက ဖော်ပြနေသည်။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် နာဆာ၏ MESSENGER အာကာသယာဉ်မှ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်နီးပါးခန့်ရှိသော ရေခဲလွှာကို မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းတွင် ခြေရာခံမိသည်ဟု အတည်ပြုခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်သို့ မရိန်နာ ၁၀ (Mariner 10) နှင့် မက်ဆင်ဂျာ (MESSENGER) ဆိုသော အာကာသယာဉ် ၂ စင်း ရောက်ရှိခဲ့သည်။ မက်ဆင်ဂျာ အာကာသယာဉ်သည် ဂြိုဟ်အနီးမှ ဖြတ်၍ တစ်ကြိမ် ပျံသန်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လမှ စတင်၍ ဂြိုဟ်ကို ၁ နှစ်ကြာမျှ လှည့်ပတ်ခဲ့သည်။ မက်ဆင်ဂျာ အာကာသယာဉ်သည် မာကျူရီဂြိုဟ်အား အကြိမ်ပေါင်း ၄၀၀၀ လှည့်ပတ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပရယ်လ ၃၀ တွင် လောင်စာကုန်ခမ်းကာ ဂြိုဟ်ပေါ်သို့ ထိုးကျမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်၏ အင်္ဂလိပ်အမည် မာကျူရီကို ရောမဘုရား၏ အတောင်ပံပါသော တမန်တော် ၏ အမည်ကို အစွဲပြု၍ မှည့်ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နေကို အလွန်လျှင်မြန်စွာ လှည့်ပတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မာကျူရီဂြိုဟ်အား မြေပြင်မှလေ့လာမယ်ဆိုပါက အလွန်ခက်ခဲမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မာကျူရီသည် နေနှင့် အလွန်နီးကပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တရုတ်၊ ကိုရီးယားနှင့် ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု တို့၌ မာကျူရီဂြိုဟ်ကို ရေနှင့်ဆိုင်သောကြယ်ဟု ဖော်ပြကြသည်။
↑ The MeanPlane (Invariable plane) of the Solar System passing through the barycenter (2009-04-03)။ 2009-04-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ (produced with Solex 10 written by Aldo Vitagliano; see also Invariable plane)
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ ၅.၄ ၅.၅ ၅.၆ Munsell၊ Kirk (May 28, 2009)။ Mercury: Facts & Figures။ Solar System Exploration။ NASA။ 2008-04-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ "Near-Surface Temperatures on Mercury and the Moon and the Stability of Polar Ice Deposits" (19 February 1999). Icarus 141 (2): 179–193. doi:10.1006/icar.1999.6175. Bibcode: 1999Icar..141..179V. Figure3with the "TWO model"; Figure5for pole.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်&oldid=513146" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဧပြီ ၂၀၂၀၊ ၂၀:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။